Ny faniriana hihinana vovo-katsaka dia mety hanondro olana ara-pahasalamana | Nutri Diet
Aron | | Vatsim-pivelomana
mihinana vovoka katsaka na ny vongan-katsaka dia tsy vitan'ny hoe marary fotsiny, fa mety hanondro koa ny fisian'ny aretina ifotony, toy ny tsy fahampiana mineraly na diabeta bevohoka, Izany no antony mahatonga anao hahatsapa jiro mena na fampitandremana hanontany ny mpitsabo anao momba ny fahasalamana, rehefa mahatsapa filan'ny katsaka ianao.
Ny Cornstarch dia nalaina avy amin'ny endosperma voarakitra ao am-pon'ny voan-katsaka, izay ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo ho mpandraharaha matevina ary amin'ny tranga sasany, toy ny vovoka talcum misolo ny vatana, izay na dia tsy mampiseho voka-dratsy misy poizina aza ao aminy, ho an'ny olona sasany maniry mafy na maniry izany dia afaka manondro isan-karazany tsy fahampiana mineraly.
ny vehivavy bevohoka Izy ireo dia mety maneho ny faniriany zavatra tsy azo levona noho ny tsy fahampian'ny mineraly na ny tsy fahampian'ny otrikaina toy ny zinc na vy, voajanahary amin'ity toe-javatra ity, miantso ny tenany hoe "pica"Faniriana zavatra tsy ara-tsakafo na fitaovana, tena fahita amin'ny ankizy izay mazàna mihinana loto na taratasy.
Ny soritr'aretin'ny pica dia midika hoe maniry hihinana; volo, ranomandry, fasika, loko sy tanimanga, na izany aza, mba hamaritana aretina dia tsy maintsy jerena mandritra ny iray volana farafahakeliny ny lamina, hoy ny rakipahalalana ADAM.
Ny olona voakasik'izany dia mijaly amin'ny tsy fahampiana mineraly izay mivoaka amin'ny fitsapana ra matetika natao hanamarinana ny haavon'ny vy sy zinc, izay ny tsy fahampiana matetika. Ny mpitsabo anao dia tokony hanombatombana amin'ny fanapoizinana na aretina, satria mety voaloton'ny taim-biby na poti-loko sns ny tany.
Matetika ny fitsaboana dia mifantoka amin'ny famenoana otrikaina tsy hita, ny vahaolan'ny hafa olana ara-pahasalamana ary ny fiovan'ny fitondran-tena amin'ny alàlan'ny fitsaboana, ary koa ny fanafody indraindray dia voatendry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ny faniriana hihinana vovo-katsaka dia mety hanondro olana ara-pahasalamana
Natividad dia hoy izy:
Isaky ny te-hihinana vovo-katsaka na katsaka aho. Mpandevo aho ary raha tsy manana aho dia hividy amin'ny fotoana rehetra. Tsy haiko izay hatao hampitsaharana ny fahazarana.
Valiny tamin'i Natividad
Toa ahy izay atolotra anao, mety hanimba be ve ny fihinanana be ????
Ruby dia hoy izy:
Mihinana boaty mpanelanelana isan'andro aho! Tsy afaka nandao azy aho… Ratsy ve? Inona no asaina hatao?
Valiny tamin'i Ruby
mangidihidy dia hoy izy:
toy ny boaty telo lehibe isan-kerinandro manampy ahy
Valio ny mangidihidy
Martha Maria Diaz dia hoy izy:
Vokatry ny "divertikulitis" heverina fa araka ny fitarafana dia nanambara ny fisian'ny diverticula izay tsy hita tao amin'ny zanatany, izay tena nirehitra sy tamin'ny fanaintainana mafy, tsy maintsy nandeha nisakafo aho mba hisorohana ny fandidiana amin'ny fotoanan'ny asa lehibe kokoa (mpilalao sarimihetsika aho ary ao amin'ny Mar del Plata ataontsika ny vanim-potoan'ny Teatra) Amin'izany fomba izany dia kely dia kely ny zavatra nohaniko ary na izany aza, nitohy ny fanaintainana ... notoroana hevitra aho (nataon'ny marary hafa izay toa ahy , manaova reflux gastric) hanao touch-up ho an'ny tongotry ny fandriana 8 sm ny halavany ary torimaso ambony loha sy bubur ny vongan-katsaka ho an'ny sakafo maraina mba hamoronana horonantsary miaro ny esophagus amin'izay hohaniko. Matetika aho no mihinana azy amin'ny kanelina sy ronono kely, (porridge) tsy lasa andevoziko, misaotra Andriamanitra! ary antenaiko fa anio aho mihinana azy dia miaro ahy bebe kokoa amin'ny sakafo rehetra (efa lasa mpihinan-kena aho fa misy legioma manimba) satria miaraka amina ovy, betiravy, vary, akondro tsy misy voa, voatabia voahitsakitsaka ary tsy misy voa ( kely) ary tsara ... ny fanaintainana indraindray dia eo, manana gastritis sy gallstones koa aho. Tsy isalasalana fa ny zava-drehetra, toy ny hafa avy amin'ny fanafody tsy steroidal sy kortikosteroid izay raisiko isan'andro mandritra ny 6 taona mandritra ny ho.
sy ny fihenan-tsofina mihombo ...
Valiny tamin'i Martha Maria Diaz
vany dia hoy izy:
Kivy tanteraka aho fa mihinana boaty katsaka 3 isan'andro, tsiroiko fa tsy ateliko izany dia nororako tsy ho faty aho, zatra mitroka ny valanoranoko noho ny fitsakoana be araka izay azoko atao mba hamoahana io banga io azo antoka fa mandratra ahy
Valiny tamin'i Vany
Toy ny isan'andro ... inona no miteraka fitohanana ... tokony hohaniko mba ho ara-dalàna toy ny teo aloha ... matahotra ny hanomboka ny ... servieta ...
veloma dia hoy izy:
Faly aho fa tsy izaho irery no adala mihinana varimbazaha, tamin'ny voalohany dia ratsy kokoa noho ny nihinana vovoka ho an'ny tongotra aho, na dia fantatro aza fa nandratra ahy izany, dia niezaka nanafina izany aho tamin'ny fampifangaroana ny vovobony tamin'ny talc ary izany tena tsara tokoa na dia fantatro aza fa mbola ratsy izany, izao aho dia tsy mihinana afa-tsy starch mba hampitony ny faniriako amin'ny talcum fa lasa fiankinan-doha amiko ve izany?
Valio ny Bye
Noheveriko ho adala aho fa izao novakiako izao dia tonga saina aho fa tsy izaho irery no nihinana voan-katsaka nandritra ny taona maro fa tena tia an'io aho isan'andro ary tsy haiko na normal ve izany fa hatramin'izao dia mbola tsy nanao izany. Tsy nisy zavatra tsy hita fa misy olona toa ahy ve?
Valentina Garcia dia hoy izy:
Izay soso-kevitra momba ny fiankinan-doha amin'ny katsaka
Allergie amin'ny sakafo; Asidra sitrika
Zava-pisotro italianina mahazatra